Samsung Dlight (Samsung Electronics Building) သည်ကြည်နူးဖွယ်ကောင်းသလော။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 31, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 0
Samsung D'light သည် Samsung ၏လက်ရှိနှင့်အနာဂတ်ထုတ်ကုန်များနှင့်တိုးတက်မှုများကိုပြသသည့်စတိုး / ပြပွဲဖြစ်သည်။ Samsung d'light သည် Samsung Electronics ၏ဌာနချုပ်တည်ရှိသည့်အဆောက်အ ဦး တစ်ခုတည်းအတွင်းတွင်ရှိသည်။ ၎င်းသည်အခမဲ့ ၀ င် ရောက်၍ အလည်အပတ်သွားနိုင်သည်။ သုံးထပ်ဆမ်ဆောင်းသည်အလင်းရောင်ဖြစ်စေသည်
ဆိုးလ်မှာ 16 Namsan Seoul Tower မှာလုပ်စရာတွေ။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 10, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 0
Namsan Seoul Tower သို့သွားရန်အကြောင်းပြချက်များလိုပါသလား။ တကယ်လား သင်အကြောင်းပြချက်မလိုပါ! Namsan Seoul Tower သို့လာရောက်ရန်အကြောင်း (၁၆) ချက်ရှိသည်။
ဆိုးလ်မှာ Lotte World Mall သို့လာရောက်ရန်အကြောင်းရင်း ၉ ။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 9, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 0
Lotte World Mall သည်တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်မြို့ရှိကြီးမားသောစူပါမားကက်ကြီးတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ဒီမှာမရှိဘူးဘာလဲ World Mall သည်ဆိုးလ်ရှိ၎င်း၏တည်နေရာကိုလျှော့တွက်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆိုးလ်မှာ Dongdaemun ဒီဇိုင်းပလာဇာ၊ လာရောက်ရန်အကြောင်း ၄ ချက်
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 9, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 1
Dongdaemun Design Plaza သည်မည်သည့်နေရာတွင်တည်ရှိသနည်း။ အဲဒီအကြောင်းကားအဘယ်သို့? ငါအဲဒီကိုဘယ်လိုသွားရမလဲ လည်ပတ်ရန်ပျော်စရာနေရာလား။ ငါထွက်ရှာရန်ထိုအရပ်သို့သွားရောက်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအချိန်အကြောင်းကိုဖြစ်ခဲ့သည်။
ဆိုးလ်တာဝါမှာတစ်ရက်။ တစ်ရက်အတွင်း N Seoul Tower ကိုသွားရန်ကျွန်ုပ်၏ခရီး။ တစ်နေ့မှာဆိုးလ်တာဝါမှာအရာရာကိုကြည့်ဖို့အချိန်မလုံလောက်ပါ ငါအနည်းဆုံးနှစ်ရက်အကြံပြုပါသည်
ဆိုးလ်မှာ အိုလံပစ်ပန်းခြံ။ လာရောက်လည်ပတ်ရန်အိုလံပစ်ဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 8, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 0
တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်တွင်တည်ရှိသောအိုလံပစ်ပန်းခြံသည်လူတိုင်းလည်ပတ်ရန်နာမည်ကြီးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ The Running Man TV show သည်ယခင်ကတည်နေရာကိုရိုက်ကူးခဲ့သည်။ အနားယူရန်၊ လူမှုရေးအရစုဝေးရန်နှင့်ဆိုးလ်မြို့တွင်အနားယူရန်အတွက်အလွန်ကောင်းသောနေရာဖြစ်သည်။
ဆိုးလ်မှာ Lotte ကမ္ဘာ့မျှော်စင်။ ငါသိရန်လိုအပ်သမျှ။
Lotte ကမ္ဘာ့မျှော်စင်။ ငါမလည်ပတ်မီသိရန်လိုချင်ခဲ့သမျှ။ တောင်ကိုရီးယား၊ ဆိုးလ်တွင်တည်ရှိပြီး၎င်းသည်အမျိုးသားမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်အခုငါသိပြီ
ဆိုးလ်မှာ Lotte World Tower နှင့် Mall ။ ကိုရီးယား၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 8, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 1
Lotte World Mall တွင်တည်ရှိသော Lotte World Tower သို့ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးသွားရောက်ခြင်း။ ကြည့်ရတာလုပ်စရာတွေများလွန်းလို့ငါ့အတွက်နောက်ဆုံးတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ ဒီ post မှာအားလုံးအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ
ဆိုးလ်မှာ Lotte ကမ္ဘာ့ငါးပြတိုက် ကိုရီးယားတွင်သမုဒ္ဒရာ၏အံ့ဖွယ်အမှုများ!
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 5, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု | 0
Lotte World Aquarium၊ Lotte World Mall အတွင်းရှိသမုဒ္ဒရာ၏အံ့ဖွယ်အမှုများ၊ ဆိုးလ်တောင်ကိုရီးယား! ရေငုပ်ခြင်းဝတ်စုံမလိုအပ်ပါ။ ရုံ၌လက်ျာဘက် Walk!
ဆိုးလ်မှာ အဆိုပါ KPOP အတွေ့အကြုံအတွင်းပိုင်း SMTown ပြတိုက်
SMTown ပြတိုက်သည် Hallyu Wave Phenomenon ၏စုဆောင်းထားသောမှတ်တမ်းနှင့်အချိန်ဖြစ်သည်။ ပြတိုက်သည် K-Pop အရည်အချင်းများသမိုင်းနှင့် KPop ပရိသတ်များလာရောက်လည်ပတ်ရန်အချိန်ဇယားကိုပြသသည်။
ဆိုးလ်မှာ COEX Mall - စျေးဝယ်ခြင်းအတွက်လူကြိုက်များသောခရီးသွား At ည့်ဆွဲဆောင်
by Gyopo Tacticool Oppa ကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်သည် | ဒီဇင်ဘာ 4, 2020 | လူကြိုက်များသောဆွဲဆောင်မှု, စျေးဝယ် | 0
COEX Mall သည်ဒေသခံများနှင့်ခရီးသွားများအတွက်ရေပန်းစားသောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ကိုရီးယားသို့လည်ပတ်လျှင် COEX Mall ကိုတွေ့ရန်သင့်အားအကြံပေးလိုပါသည်။ COEX Aquarium ကိုစစ်ဆေးပါ။